ဘယ်လိုလှူနေကြလဲ? ဒီနေ့ကစပြီး ဒီလိုပဲလှူ” (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး) – XB Media Myanmar
မြတ်စွာဘုရားက လှူတဲ့အခါ ကိုယ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ကို စိတ်မရောက်စေနဲ့တဲ့ သံဃာကိုပဲ စိတ်ရောက်အောင်ရည်စူးပြီးလှူတဲ့ဒါဖြင့် သံဃာကိုစိတ်ရောက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုပါစို့.. ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြွကြွ ဩော်ဒါဟာ ဘုရားလက်ထက်က သံဃာတွေရဲ့အဆက်အနွယ် အဲဒီ ဘုရားလက်ထက်ကသံဃာတွေထိအောင် အာရုံပြုပြီးတော့ လှူလိုက်တာ. သူ့ကိုမကြည့်ဘူး ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ဘူး သံဃာဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲကြည့်တာ ဒီလိုဖြစ်ရမယ်..
အခုကြွလာတာဟာ အဲဒီသံဃာတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲလို့ပဲ စိတ်ထဲမှာထား..သံဃာကိုလှူတာဟာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတာမဟုတ်ဘူး ဒီလိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ သံဃာလှူတာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာနဲ့က အလွန်ကွာခြားတယ်. ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာက အကောင်းအဆိုးရှိနိုင်တယ်.. ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့ မျက်နှာကိုမကြည့်နဲ့..နော်..
ဆွမ်းလောင်းလို့ရှိရင်လည်း ဘုန်းကြီးမျက်နှာလည်းမကြည့်နဲ့ ဘုန်းကြီးကလည်း ဒကာမမျက်နှာကို မကြည့်ရဘူး ကြည့်ရင်အပြစ်ပဲသူက..ဆိုလိုတာက မျက်နှာမကြည့်နဲ့ သံဃာဆိုတဲ့အနေနဲ့သာ သတ်မှတ်..အကျိုးရှိအောင်လို့ မြတ်စွာဘုရားက အဲ့လိုဟောတာ.. မြတ်စွာဘုရားက သံဃာကိုသာလှူဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောထားတုန်းဆိုလို့ရှိရင်အေး နောက်ပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်
သာသနာပျက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့သာသနာကွယ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ ရဟန်းတုရဟန်းယောင်(ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်)တွေ ပေါ်လာလိမ့်မယ်..သူတို့မှာ ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဟာဒီ လည်ပင်းကို သင်္ကန်းရောင်လေး ပတ်ထားတာလေးလောက်ပဲ ရှိတော့မယ် ကျန်တာက လူဝတ်လူစား အဲ့တာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေပြီမြန်မာပြည်မှာလည်း ရှိရင်ရှိလာမှာပေါ့လေ..
ဂျပန်မှာက ဂျပန်ဘုန်းကြီးလို့သာပြောရတာ အိမ်ထောင်လည်းပြုတယ်..ဘုန်းကြီးတို့ သီရိလင်္ကာမှာနေတုန်းကဒီJapanese Buddhismနဲ့ Zin Buddhismကို လာပြီးတော့သင်ပေးတဲ့ ဂျပန်ဆရာတစ်ဦးရှိတယ်..ဂျပန်လူကြီးထင်နေတာ.. မဟုတ်ဘူး ..အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတဲ့..ဘုန်းကြီးကလည်း ဘိုကေနဲ့ နက်ကတိုင်နဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့လာတာကိုး အဲတော့ ဘုန်းကြီးမှန်းမသိဘူး..
ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါလေးမှာသာ ရဟန်းအသွင်ယူ အပေါ်ကပတ်လိုက်တာ ဒိပြင်အချိန်မှာ လူဝတ်ပဲသူက အဲ့လိုနေတာ.. အဲ့တော့ မြတ်စွာဘုရားက ဘာဟောထားတုန်းဆိုရင် နောင်အနာဂတ်မှာတဲ့ သံဃိကဒါနဟာ ဘယ်လောက်ထိအကျိုးပေးနိုင်တုန်းဆိုလို့ရှိရင် ဒီရဟန်းတု ရဟန်းယောင်တွေကို လှူတဲ့အခါမှာတောင် သံဃာအစစ်ကို ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းပါတယ်ဆိုရင် အဲဒီဒါနကုသိုလ်ဟာ
အတိုင်းအဆမဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်လို့ ဒီလိုဟာထားတာ ‘ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်’မှာ.. အဲ့တော့ ကိုယ့်စိတ်က အဓိကကျတယ်ဒါကြောင့်မို့ အိမ်မှာဆွမ်းခံကြွလာတယ်ဆိုရင် သံဃာပဲ သံဃာအနေနဲ့ပဲလှူ ဒါကို တိုက်တွန်းတာသံဃာဆိုတာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူး တစ်သာသနာလုံးမှာရှိတဲ့သံဃာတွေကို ရည်ညွှန်းလိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ရည်ညွှန်းတာနော်..
အဲ့ဒီလို သံဃာဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ ရည်စူးပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာ ကြည်ညိုလိမ့်မယ်
လှူတဲ့ဆွမ်းဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အထိ ဘုရားလက်ထက်က အရိယာသံဃာတွေအထိ ရောက်သွားတယ်.. ဒီကိုယ်တော်က ကိုယ်စားလှယ် သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်လို့ စိတ်ထဲမှာထား..နော်
သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လှူလိုက်ရင် အဲဒါကို အာရုံပြုလိုက်ရတဲ့အခါမှာ စိတ်တွေကြည်နူးလာမယ် အဲဒီလိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ သေဆုံးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရာသုဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဟောတာနော်.. ဒါက ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ မိန့်မှာချက်ပဲဖြစ်တယ်နော်..
လှူဒါန်းရတဲ့အချိန်ကာလမှာ မိမိတို့ရဲ့စိတ်စေတနာဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အကျိုးစီးပွားများပြားစေဖို့အတွက် အခုလိုဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကို မိန့်ကြားတာပဲဖြစ်တယ်..ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး တရားတော်အသံဖိုင်မှ ကောက်နုတ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်၍ စာလုံးသတ်ပုံမှားယွင်းပါက သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန်🙏စေတနာမေတ္တာအရင်းခံဖြင့်💜
သွားကန်တော့နေကျ အဘွားကို သွားကန်တော့ရင်း အဘွားရဲ့ဆုပေးစကားတွေကြောင့် ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဖြူဖြူထွေး